कृष्ण ओलीको दुवै हात हाल्न रुपा हिडिन मुम्मइ - Muldhar Post
कृष्ण ओलीको दुवै हात हाल्न रुपा हिडिन मुम्मइ
मूलधार पोष्ट २०७६, ४ श्रावण शनिबार
कृष्ण ओलीको दुवै हात हाल्न मुम्बई पुगेका छन् । उनीहरु आजै मुम्बई पुगिसकेको रुपाले बताएकी छन् । अब कृष्णको हात हाल्न केहि दिन उनीहरु मुम्बई रहने छन्। खुट्टा जोडिसकेका कृष्णको अब हात पनि चांडै हाल्ने भएको छ। कृष्णले हात हाल्ने भएपछी रुपा मगर ओली निकै उत्साहित देखिन्छिन। कृष्णको सक्लो हात भएको त्यो क्षणको पर्खाइमा रहेकी रुपा उपचारका लागि मुम्बई उड्दा निकै उत्साहित देखिन थिइन्।
कृष्णको उपचारको लागि केहि दिन अघि जाने भनिए पनि आग्राको लागि उड्ने मुम्बई उडान क्यान्सिल भएका कारण रोकिएका थिए । रोकिएपछि रुपाले उपचारका लागि साउन महिनामा मुम्बई जाने जानकारी गराएकी थिइन् । कृष्णको हात जोड्न जाने जानकारी पाएपछि उनका शुभचिन्तकहरुले सफलताको शुभकामना दिएका छन् । रुपा र कृष्णका फ्यान तथा शुभचिन्तकहरुले उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सफलताको शुभ कामना समेत दिएका हुन् । कृष्णको खुट्टा जोडी सकिएको छ । तर फिटनेसका लागि डाक्टरको सल्लाहअनुसार शारीक अभ्यास गरिरहेका छन् । नक्कली खुट्टाद्वारा कसरि हिड्न सकिन्छ भनेर फिजिकल अभ्यास गरिरहेका छन् ! उनि नक्कली खुट्टाको सहायताले पूर्णरुपमा हिड्न अझै केहि समय लाग्ने छ ।
कृष्णको हातखुट्टा हाली सकेपछी बच्चा जन्माउने योजना ।
कृष्ण ओली पछिल्लो समयमा निकै चर्चित बनेका व्यक्ति हुन् । उनको दुवै हात र एक खुट्टा छैन । उनको कथा थाहा नहुने सायद कमै छन् होला । कृष्णको हरेक पाइलामा उनकी श्रीमती रुपा ओलीले पनि साथ दिदैँ आएकी छिन् । कृष्णको अवस्था पहिले भन्दा केही सुध्रिएको छ । रुपा र कृष्णले आफूलाई सन्तान जन्माउने चाहना भएको केहि दिन अघि बताएका थिए । रुपा र कृष्णले कृष्णको हात र खुट्टा हालिसकेपछि बच्चा जन्माउने योजना बनाउने बताएका हुन् । कृष्ण आफैँमा कमजोर छन् तर पनि उनी आफू जस्तै अरु व्यक्तिहरुलाई धेरै सहयोग गर्छन् । उनले बेला बेलामा अनाथ आश्रम लगायत गरिब दुखीलाई सहयोग पनि गर्ने गरेका छन् ।
मुना र मदनको प्रतिक रुपा र कृष्ण । मुना मदन एक कारुणिक काब्य हो जसले मुना र मदनको बिछोडको प्रेम कथाको बर्णन गर्छ। मदन पैसा कमाउनको लागि विदेश जान्छ र फर्कने क्रममा बाटोमा बिरामी हुन्छ। बिरामी मदनलाई बीच बाटोमै छोडेर उसका साथिहरू आउछन र मदनको मृत्यु भएको कुरा भन्छन्। यो कुराले मुनालाई निकै पिडा हुन्छ।
येही पिडा सहन नसकी शोकमै मुनाको मृत्यु हुन्छ। उता मदनलाई बाटोमा अलपत्र रूपमा एक जना भोटेले फेला पार्छ। उसले मदनको खुबै स्याहार गर्छ (तेस् बेला मदन् यो भन्छ् ” छेत्रिको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुदैन,मनिस् ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन”) र जब मदन निको भएर घर फर्कन्छ, त्यो बेला उसको परिवार मुना र आमाको मृत्यु भएको खबर सुनेर ऊ मर्माहत हुन्छ। अनि आफु पनि मर्छ ।
यसरि कलियुगमा मुना र मदनको परिचय बोकेका प्रेमको आदर्शको रुपमा परिचित प्रेम जोडी हुन् रुपा र कृष्ण । उनीहरुको जिबन कथा पनि निकै दर्दनाक छ । रुपा कृष्णको यो जोडी मायाको प्रतिक हो ! कलियुगमा मायाको पाठशालाको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ, जो मुना र मदनको भन्दा निकै ओजपूर्ण देखिन्छ ! स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपालले त्यसै यो गित गाएका होइनन, ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’।
साँचै रुपाको मायाले कृष्णको जिन्दगीमा फरक पारेको छ । रुपाको निश्चल मायाले कृष्णको जिबन फेरिएको सत्य हो । सायद रुपाको माया अपुरो हुन्थ्यो भने कृष्ण आज आँशुको भेलमा पौडी रहेका हुन्थे । बेसहारा जिबन बाँची रहेका हुन्थे । तर एउटा नारीको मायाले आज धेरै फरक पारेको छ । मायाको प्रति मुर्ति हुन् रुपा र कृष्ण । मायामा धोका खानेहरुका लागि रुपा र कृष्णको जिन्दगि एउटा पाठशाला हो ।
हेर्नुहोस काठमान्डौ देखि मुम्बई सम्मको यात्रा हेराैं एक भिडियो सहित ।
चर्चित अभिनेत्री वर्षा राउतले
समाजसेबी दिलिप र लक्ष्मी
सरकारको विरुद्धमा निक्लियो लुटेरा
प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाइ भीम रावलको
कीर्तिपूर डेरा गरि बस्ने
विवादमा गाएक तथा मोडेल
जन्म दिनको खर्च जोगाएर